August 10, 2020 1625
सरकारी सेवा’मा प्रवेश गर्नु, धेरै नेपाली यु’वाको सपना हुन्छ। त्यही सपना पूरा गर्न अहिले पनि लाखौँ युवा कडा मेहनतका साथ लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन्। लाखौंले लोकसेवामा परीक्षा साम’ना गर्छन्। सीमित परीक्षार्थीले परीक्षाफल आफ्नो प’क्षमा पार्छन्।
वर्षौँको कडा मेहनतबाट लो’कसेवाको नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि इलाम फाकफोकका गजेन्द्र भट्टराईले जिन्दगीको बाटो मोडे। खाडी मुलुक पुगे। खाडी’बाट फर्केपछि धेरै कमाउने अभि’लाषामा दक्षिण को’रिया पुगे।
खाडीदेखि कोरियासम्म गरी विदे’शमा आठ वर्ष कडा श्रम बेचेका भट्टराई निजामति सेवामा प्रवेश गरेका छन्। खाडी र कोरियाको श्रमले उनलाई परिणाम निकाल्न’लाई कडा श्रम चाहिने सिका’एको थियो।
पढाइ चटक्कै छाडेर विदेश गएका उनले निजा’मतिप्रतिको आशक्तिमा कमी हुन दिएनन्। फलतः स्वदेशी भूमिमा नै रमाउने अवसर प्राप्त गरे। ईलामको फाक:फोक गाउँमा जन्मिएका उ’नले त्यहीँको सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए।
उनमा पढेरै केही गर्ने सोँच भए पनि निम्न’वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण प्रमाणपत्र तहको अध्यययनलाई बीचैमा छाडेर खाडी मुलुक हानिनुपरेको उनले सुनाए।
मध्यपूर्वको देश साउ’दी पुगेका उनले त्यहाँ ३२ म’हिना श्रम गरेर केही आर्थिक जोहो गरे। खाडी पुगेका बेला उनलाई बीच बाटोमै रोकिएको अध्ययनप्रति पश्चाताप भइरहन्थ्यो। स्वाध्यय’नको क्रमलाई साउदीको तातो घाममा से’लाउन दिएनन्।
स्वदेश फर्किएपछि पुनः अध्ययनलाई निरन्तरता दि’एका उनले प्रमाणपत्र तह हुँदै विसं. २०६९ सालमा ताहाचल क्याम्पसबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातक तहको अध्ययन सके। त्यसपछि लोक’सेवाको तयारी गर्ने सोचमा उनी थिए। लोक’सेवाको तयारी भन्दा कोरियाको कमाइकाे सोंच मनमा हाबी भइदियो। आर्थिक उपार्जनको बलि’यो बाटो खोजेका उनले दोश्रो बाटो कोरिया बन्न पुग्यो।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर २०७० सालमा को’रिया प्रवेश गरेका उनले कोरिया’मा अत्यन्तै कडा श्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा बन्यो। समय र कामको महत्त्व कोरियाबाट थप बुझ्ने अवसर पाए। मोटरपार्टस् कम्पनीमा दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएका’ले त्यहाँ बसुन्जे’ल स्वाध्ययनमा समय दिन नसके’को सुनाए।
कोरियामा ४ वर्ष १० महिना का’म गरी स्वदेश फर्किए। लोकसेवाको तयारी गरेर सफलता हात पार्न सकिन्छ भन्नेमा उनमा प्रारम्भिक समयमा कमै वि’श्वास थियो। लोकसेवातिर नला’गेर व्यवसाय गर्ने सोच पनि थियो। देश काल बुझेपछि लगानीका लागि उपयुक्त समय होइन भन्नेमा पुगे। पुरानै उद्देश्यमा फर्के। उही लोकसे’वाको परीक्षा।
‘मलाई लोक’सेवामा सफलता प्राप्त हुन्छ भन्नेमा अत्यन्तै न्यून आशा थियो, त्यसैले एकपटक हेर्छु भएन भने कोरि’यन भाषा पढेर पुनः कोरिया नै जान्छु भन्ने सोँच बनाएको थिएँ,’ उनले’ भने। अत्यन्तै छोटो समयमा पनि कडा मेहनत’का साथ गरिएको अध्ययनका कारण आफूले सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए।
अधिकृत पदमा खुला’तर्फ २० जनाको कोटा रहेकोमा नवौँ नम्बरमा उनको नाम निस्किएको थियो। उनी कोरियामा काम ग’र्दा मेहनत अनुसारको कमाई हुने भएपनि कोरियाली रोजगारदाताबाट भने अत्यन्तै तल्लो स्तरको व्यवहार वा हेपाई सहनु’पर्ने अनुभव सुनाउँछन्।
‘कोरिया रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली युवाहरु यहाँका शिक्षित बेरोजगार हुन्। उनीहरुसँग एकेडे’मिक सर्टि’फिकेट भएर पनि स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। त्यसैले एउटा शिक्षित युवाका लागि कोरियाले महत्व’पूर्ण पाठ सिकाउँछ,’ नेपाल लाइभसँगको कुराकानीका उनले भने।
भट्टराई हाल सोलु’खुम्बु जिल्लाको माप्य दूधकोशी गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृतको रूपमा सेवारत छन्। एउटा विपन्न परिवारमा जन्मिएर सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको सामान्य व्य’क्ति वर्षौंसम्म विदेशिएर श्रम बेचेकाह’रूका लागि लागि सरकारी निकायमा प्रवेश गर्न चाह’नेहरूका लागि प्रेरणा र उदाहरण बने’का छन् उनी।
आर्थिक स्थितिका कारण प’ढाईलाई चटक्कै छाडेर विदेशिनु परेका नेपाली युवाका लागि एउटा ऊर्जा बनेका छन् गजेन्द्र। खाडीदेखि कोरियासम्म अर्काको देशमा पसि’ना बगाउन भौतारिँदाको पीडा सुनाउँदै उनी थप्छन्, ‘त्यहाँ दुर्व्यवहार सहेर काम गर्नुपर्द’थ्यो। यहाँ आफ्नै देशमा छु। इज्जतका साथ काम गर्न पाइएको छ।’
भट्टराई हाल सरकारी सेवासँगसँगै समा’जशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरको अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। इच्छाशक्ति भएमा जति लामो समयसम्म पढाइ रोकिए पनि त्यस’लाई निरन्तरता दिएर सफ’लता प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘म करीब ५ वर्ष कोरि’यामा रहँदा बिहान ‘अलार्म’ लगाएर उठ्ने र मध्यरात’सम्म कडा मेहनत गरी फर्केर आएर सुत्नु पर्ने अवस्था थियो। पढ्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। अहिले मेरो पढाईलाई पुरानै लयमा फर्काइसकेँ।’ गाउँपालि’काको शिक्षा शाखा प्रमुख रहेका उनी प्राविधिक शिक्षामा तीनै तहका सरकारहरूले जोड दिनुपर्ने धा’रणा राख्छन्।
यो सफलताको कथा शिव भुषालले लेखेका हुन् । उनी हाल रोजगारीको शिलशिलामा दक्षिण कोरियामा छन् ।
Prevआज साउन २६ गते अन्तिम साउने सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्..
Nextघट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्
हराइरहेको विमानका को-पाइलटले उड्नुअघि बुवालाई गरेको त्यो अन्तिम कल…